Date My Pet » 3 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Kana Uchida iite
kubudikidza Mihaela Schwartz
3 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Kana Uchida iite
Last updated: Oct. 28 2020 | 2 Maminitsi verenga
Vakadzi vazhinji vanobvumirana paanoti kuti varume vanhasi vanoratidza simba nokutya kuzvipira kana totaura ukama. The vanachiremba achakuudzai chete pfungwa yave akaona pamwe vasikana uye ichatsanangura imi mose pamusoro ichi kutya kuti midzi – zvinonetsa kuti varasikirwe norusununguko rwavo, kwavo voga uye rusununguko. Uri pasi pfungwa yokuti mumwe wako haasi agadzirira kupara? Unofanira kuziva kuti une kiyi kuti murume wako wose uye kuti zvaunoita guru zvazvinoita pamusoro chisarudzo chake kugara ukama kana achizvikoshesa inotevera padanho. Kuzvipira hachisi chinhu munhu anogona kutaurwa kupinda, munoziva kuti kare. Kana kusarudza zvakanaka nguva, zvose zvaungaita kana uchida iye iite kuti vabudise kuti manzwiro chaiwo kuti ndichamuita kunzwisisa ndimi One.
Kuti anzwe chaiwo
Hapana munhu anoda kunzwa nezvokutengeswa amutsvaka sokunge kuzara basa tsananguro. Tora nguva kuziva murume wako pane kumuita nepa achifanira kuongorora ndege kuti chokwadi ndiye chakarurama. kana kufambidzana, Vakadzi vazhinji mazuva ano vane tsika yokuzivisa zvavanoda kubva murume asati kunyange nokuzivana iye chaizvo. Imhaka hwedu upenyu hwechipatapata? pamwe, asi haufaniri kurega magariro kumanikidzwa yokuwana murume kumira munzira mufaro wenyu. Ita Guy wako anzwe chaiwo zvaari pane kuparadzira mashoko kuti chatozara mumwe nzvimbo. Zviri mumwe mukuru; kana asiri mukuru kutya vanhu vane panyaya ukama uye kuzvipira. Kana munhu anozozviziva muri uchitsvaka murume, Achatora kutiza. Your kudyidzana mangwanani muukama kunofanira zvose nezvokuziva kuziva murume. It anomuita sokuti yakasimbiswa.
Musarega anzwe zvakare vachimanikidzwa
Pane matunhu mikana Guy wenyu uchanzwa vachimanikidzwa kana iwe pakarepo chinja upenyu hwako hwose vakamupoteredza. Zvinhu zvinoitika zvishoma nezvishoma, kunyange patinotaura nezvorudo pakutanga kuona. Uyezve, kuzvipira ane kuuya kubva mukati uye haagoni kumanikidzwa pamusoro munhu. Asingafuratiri iye, kurarama upenyu hwako! Ita nguva kundosangana naye, asi musakanganwa uine mhuri neshamwari uyewo. Pane rimwe divi, hadzityisidziri amusiye ose maminitsi mashanu. Fara uye yakavimbika! Kuti anzwe rombo rakanaka kuti iwe uye refu akamirira kunzwa kuzvipira achakurumidza kuva.
Gadzira yakanaka nguva naye
A ukama refu refu hazvigoni kuvakwa pasina simba nheyo iri munodanana vamwe uye ndangariro uri kuunganidza naye. Iva nechokwadi ukawana nguva uye kuti iwe ushandise okugadzira zvinhu rako kumushamisa uye kuvaka zvakanaka kuyeuka mhando. Dzivisa kuti tisade kutaura nezveramangwana ukama hwako, hazvinei kuti zvikuru iwe obsess pamusoro penyaya. Kunakidza uye tamba! Iva munhu paanoda nokuva! Zvakanaka nguva ndiwo kiyi Mumoyo womunhu.
6 Tips To Kupona The Summer Months Solo!